Tartan Orodka 5km Ah Oo Lagu Xusayo Maalinta Caalamiga Ah Ee Dhallinyarada Adduunka Oo Hargeysa Lagu Qabtay | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Tartan Orodka 5km Ah Oo Lagu Xusayo Maalinta Caalamiga Ah Ee Dhallinyarada Adduunka Oo Hargeysa Lagu Qabtay
Hargeysa (Hubaal) Tartan orod ah oo dhererkiisu yahay 5km oo ay si wada jir ah u soo qaban-qaabiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo xidhiidhka ciyaaraha fudud ee Somaliland ayaa lagu qabtay caasimadda Hargeisa, kaas oo laga xusayey maalinta heerka caalami ee dhallinyarada adduunka ‘Internationla World Youth Day’. Tartankan orodka ah ayaa waxaa wasaaradda ciyaaraha iyo xidhiidhka ciyaaraha fudud ka maal-geliyay hay’adda IOM, waxaana ka qeyb-galay in ku dhaw 70 orod yahan, waxaana tartankan loogu magac-daray Dhallinyarta iyo Horumar waara. Tartankan ayaa waxa uu ka soo bilawday duleedka Kaantaroolkii hore ee galbeedka Hargeisa kaas oo aakhirkiina ku soo dhammaaday Xarunta Wasaaradda. Tartankan orodka oo ahaa mid aad u xiiso baddan oo la arkayay dadwayne aad u tiro baddan oo tuban wadada hareeraheeda kuwaasi oo ka qeyb ahaa dhiiri-gelinta iyo xiisaha tartankaasi.
Tartankan ayaa waxaa abaal-marrino lacag iyo billado iskugu jira la guddoonsiiyey 5-tii orodyahan ee kaalmaha ugu horeeyay kala galay oo dhammaantoodba ka socday Ciidanka Booliska, waxaana kaalinta 1-aad galay Diiriye Cabdilaahi Yuusuf, kaalinta 2-aadna waxaa galay Maxamuud Ibraahim Muumin, halka uu kaalinta 3-aad uu galay Idiris Xassan Maygaag. Waxaa iyaguna kaalmaha 4-aad iyo 5-aad kala galay Xariir Yuusuf Carab iyo Guuleed Mawliid Cabdilaahi.
Wasiirka dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland Md. Cabdilaahi Faarax Maydhane oo ay weheliyaan Agaasiyeyaasha waaxaha Ciyaaraha iyo Qorsheynta Mr. Maxamed Nuux Jibriil iyo Cabdirashiid Ceydiid Yaasiin iyo sidoo kale Guddoomiyaha iyo Xoghayaha Xidhiidhka Ciyaaraha Fudud ayaa ka soo qeyb-galay munaasibaddii abaal-marrinada lagu guddoonsiinayay orodyahanadda kaalmaha hore ka galay tartankan, oo ka qabsoontay barxadda xarunta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha.
Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Xoghayaha Xidhiidhka Ciyaaraha Fudud Mr. Cismaan Xuseen Cali, waxaana uu ka war-bixiyey qaabka ay tartankan iyo ciyaartoyda ka qeyb-galaysay ay u soo qorsheeyeen iyo sidoo kale ciddi ka gacan siisay qabsoomidiisa. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha xidhiidhka Mr. Mustafe Cali Nuur, waxaa uu isaguna ku dheeraaday ujeedada ay tartankan u qabteen iyo sidoo kale qorsheyaashooda wax qabad ee afarta sanno ee soo socda, ugu dambeyntiina wuxuu wasaaradda ciyaaraha iyo hay’adda IOM uga mahad-celiyay sida ay tartanka uga qeyb-qaateen.
Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Agaasime Waaxeedyada Ciyaaraha iyo Qorsheynta wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska, waxaana ay masuuliyiinta xidhiidhka ciyaaraha fudud uga mahad-celiyeen qabsoomida tartankan iyaga oo sidoo kalena hay’adda IOM ku amaanay doorka laxaadka leh ee ay ka qaateen tartankan orodka 5km ah.
Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Md. Cabdilaahi Faarax Maydhane, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaan ku faraxsanahay inaynu maanta qabano tartankan quruxda baddan ee orodka 5km ah, oo runtii aan uga mahad-celinayo xidhiidhka ciyaaraha fudud sida wacan ee ay u soo qaban-qaabiyeen, iyo hay’adda IOM oo iyadu dhanka maal-gelinta inaga caawisay. Orodku wuxuu ka mid yahay ciyaaraha aynu hibadda u leenahay ee ay tahay inaynu ku dedaalno oo aynu yeelano ciyaartoy baddan oo dunida ka muuqda sida Mo Farah oo kale, maanta runtii anniga iyo wasaaraddaba waxay noo tahay farxad weyn, waayo halkan waxaa laga sheegay waa tartankii ugu horeeyay ee dhanka orodka ah ee abaal-marrino intaa leeg oo lacago ay ku farxaan orodyahanada guuleystay la siinayo”.
Wuxuu hadalkiisi sii raaciyey “Waxaan sidoo kale u mahad-naqayaa cidkasta oo nagala qeyb-qaadatay tartankan oo ay ugu horeeyaan ciidanka Booliska oo intii tartanku socday noo suurto-geliyay inay wadooyinka ka celiyaan gaadiidka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka gaar ahaan Hargeysa Group Hospital oo Ambulance noo soo dirtay. Ugu dambeyntii dhallinyarta orodyahanada ah ee guuleystay iyo kuwa iyaguna dedaalay ee kaalmaha kale galay waxaan idin leeyahay dhammaantiinba waad guuleysateen” ayuu hadalkiisi ku soo koobay.
Gaba-gabaddii wasiirka ciyaaraha ayaa billadihii iyo lacagihii kala duwanaa guddoonsiiyey 5-tii orodyahan ee kaalmaha hore ku kala guuleystay, waxaana la kala guddoonsiiyey sidan hoos ku qoran.
Kaalinta koowaad = 1,500,000sl.shilin, koob iyo billad
Kaalinta labaad = 1,000,000sh.shilin iyo billad
Kaalinta saddexaad = 700,000sl.shilin iyo billad
Kaalinta afaraad = 500,000sl.shilin iyo billad
Kaalinta shanaad = 300,000sl.shilin iyo billad